Amin'izao fotoana izao, manomboka an tsipika famokarana zezika organika eo ambany fitarihan'ny drafi-draharaha mahitsy dia afaka manatsara ny famatsiana zezika tsy manimba ny tantsaha, ary hita fa ny tombony amin'ny fampiasana zezika biolojika dia be lavitra noho ny vidin'ny famokarana zavamaniry zezika, tsy hoe tombontsoa ara-toekarena ihany no resahina, fa koa anisan'izany ny tontolo iainana sy ny fahombiazan'ny fiaraha-monina. arafako biolojika ho zezika organika afaka manampy ny tantsaha hanitatra ny fiainany amin'ny tany, hanatsara ny kalitaon'ny rano, hampiroborobo ny vokatra ary farany hampitombo ny vokatra. Avy eo dia fototr'izany ho an'ny mpampiasa vola sy ny mpanamboatra zezika ny hianatra ny fomba hanaovana ny fako ho zezika sy ny fomba hanombohana ny orinasa zezika biolojika. Eto, YiZheng dia hiresaka ireo teboka mila fiheverana avy amin'ireto lafiny manaraka ireto rehefa manombokazavamaniry zezika biolojika.
Maninona no manomboka ny dingana famokarana zezika?
Orinasa zezika biolojika ahazoana tombony
Ny fironana manerantany amin'ny indostrian'ny zezika dia manondro zezika voaaro azo antoka sy voajanahary izay manatsara ny vokatra ary mampihena ny fiantraikany ratsy maharitra amin'ny tontolo iainana, ny tany sy ny rano. Ny lafiny iray hafa dia fantatry ny zezika biolojika satria ny fambolena manan-danja dia manana herijika lehibe amin'ny tsena, miaraka amin'ny fampandrosoana ny fambolena, ny tombony azo avy amin'ny zezika biolojika dia miharihary hatrany. Amin'ity fomba fijery ity, mahasoa sy azo atao ny mpandraharaha / mpampiasa vola manao izanymanomboka ny orinasa zezika biolojika.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny governemanta dia nanolotra tohana fandraisana andraikitra amin'ny fambolena biolojika sy ny orinasa zezika biolojika, ao anatin'izany ny fanampiana vola kendrena, ny fampiasam-bola amin'ny tsena, ny fanitarana ny fahaiza-manao ary ny fanampiana ara-bola, izay afaka mampiroborobo ny fampiasana betsaka ny zezika biolojika. Ohatra, ny governemanta indiana dia manolotra ny fampiroboroboana ny zezika biolojika hatramin'ny Rs.500 / isan-hektara, ary any Nizeria, ny governemanta dia manolo-tena handray fepetra ilaina amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana zezika biolojika mba hampiroborobo ny tontolo iainana Nizeriana amin'ny famoronana maharitra asa sy harena.
Afahamendrehan'ny sakafo biolojika
Manjary fantatry ny olona bebe kokoa ny fiarovana sy ny kalitaon'ny sakafo isan'andro. Ny fangatahana sakafo voajanahary dia nitombo tato anatin'ny folo taona nisesy. Zava-dehibe ny fiarovana ny fiarovana ny sakafo amin'ny alàlan'ny fampiasana zezika biolojika mba hifehezana ny loharanom-pamokarana sy hisorohana ny fahalotoan'ny tany. Noho izany, ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena ho an'ny sakafo biolojika dia manampy amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny famokarana zezika.
Pakora azo avy amin'ny zezika voajanahary
Betsaka ny fako biolojika no vokarina isan'andro manerantany. Raha ny statistika dia misy fako mihoatra ny 2 miliara taonina manerantany. Ny akora ilaina amin'ny famokarana zezika biolojika dia be dia be sy be dia be, toy ny fako amin'ny fambolena, toy ny mololo, sakafo soja, sakafo vita amin'ny landihazo ary ny sisa tavela amin'ny holatra), ny fiompiana sy ny vorona akoho amam-borona (toy ny tain'omby, zezin-kisoa, kongona ondry, tain-tsoavaly ary zezika akoho) , fako indostrialy (toy ny vinasse, vinaingitra, reside, reside mangahazo sy lavenona fary), fako ao an-trano (toy ny fako sakafo na fako ao an-dakozia) sns. Izy io dia ireo akora betsaka izay mahatonga ny orinasan-java-maniry biolojika malaza sy hambinina erak'izao tontolo izao.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny toerana misy ny tranokala
Toerana naroson'ny zavamaniry zezika voajanahary
Ny safidin'ny toerana misy ny tranokala zavamaniry zezika biolojika tokony hanaraka ireto fitsipika ireto:
● Tokony hipetraka eo akaikin'ny famatsiana akora ho an'ny famokarana zezika biolojika, mikendry ny hampihenana ny vidin'ny fitaterana sy ny fahalotoan'ny fitaterana.
● Ny orinasa dia tokony hapetraka amin'ny faritra misy fitaterana mety mba hampihenana ny fanamby ara-logistika sy ny sandan'ny fitaterana.
● Ny habetsaky ny zavamaniry dia tokony hanome fahafaham-po ny takiana amin'ny fizotran'ny teknolojia famokarana sy ny firafitra mirindra ary hamela toerana sahaza ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa.
● Halaviro ny faritra onenana mba tsy hisy fiantraikany amin'ny ain'ny mponina satria misy fofona manokana bebe kokoa na kely kokoa mandritra ny famokarana zezika biolojika na fitaterana akora.
● Tokony hipetraka amin'ny toerana misy faritra fisaka izy io, geolojia mafy, latabatra ambany rano ary rivotra tsara. Ankoatr'izay dia tokony hialana amin'ireo toerana mora mirona, tondra-drano na mianjera.
● Ny tranokala dia tokony hampifanarahana amin'ny fepetra eo an-toerana sy ny fiarovana ny tany. Ampiasao tanteraka ny tany lao na tany karankaina ary aza hipetraka amin'ny tanimboly. Ampiasao araka izay azo atao ny habaka tsy ampiasaina tany am-boalohany, ary avy eo azonao atao ny mampihena ny fampiasam-bola.
● Ny zavamaniry zezika biolojika dia mahitsizoro kokoa. Ny faritry ny orinasa dia tokony ho 10,00-20,000㎡.
● Ny tranokala dia tsy tokony ho lavitra loatra ny tariby mandeha amin'ny herinaratra mba hampihenana ny fanjifana herinaratra sy ny fampiasam-bola amin'ny rafitra famatsiana herinaratra. Tokony ho eo akaikin'ny famatsian-drano izy io hahafahana mamaly ny filan'ny famokarana, ny rano velona ary ny afo.
Raha atao teny iray, ny loharanom-pahalalana dia mitaky ny fametrahana ny indostria, indrindra ny zezika akoho sy ny fako, dia tokony ho hita eny an-tsena sy any amin'ny toeram-piompiana akoho amam-borona akaikin'ny masinina.